कस्ता मित्र बनाउने ? चाणक्यले यस्तो सुझाएका छन् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कस्ता मित्र बनाउने ? चाणक्यले यस्तो सुझाएका छन्
कस्ता मित्र बनाउने ? चाणक्यले यस्तो सुझाएका छन्
जेठ ८ गते, २०७६ - १६:३०
काठमाडौं । आचार्य चाणक्यले सुसंगत र कुसंगत व्यक्तिबाट जीवनमा कसरी प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा नीतिशास्त्रमा खोलेका छन् । चाणक्यले नोकरी, रुपैयाँ पैसा, भविष्य र जीवनसँग जोडिएका कुराहरुमा व्यक्तिका नजिकका मानिसहरुले प्रभाव पार्ने बताएका छन् ।
उनले दुराचारी साथी हुनुभन्दा व्यक्ति एकलै हुँदा जीवन सुखी हुने बताएका छन् । अन्यथा जीवनमा सुख चैन्य भन्ने नहुने चाणक्यको तर्क छ । आउनुहोस् जानौं कस्ता साथीबाट टाढिन चाणक्यले सुझाएका छन् ।
आचरण गलत हुनेबाट
यस्ता साथी जसको आचरण ठिक छैन । जसले आफ्नै माता–पितालाई पनि सम्मान गर्दैन । आफ्नै पत्नी र बच्चालाई पनि माया गर्दैन । यस्ता व्यक्तिलाई साथी बनाउनु हुँदैन । चाणक्य आफैंलाई जन्म दिने माता–पितालाई सम्मान गर्न नसक्ने व्यक्तिले अरुसँग मित्रता निभाउन नसक्ने बताउँछन् ।
जो व्यक्तिको दृष्टिमै पाप छ
आचार्य चाणक्यले सोंचमै पाप हुने व्यक्तिसँगको मित्रता पनि हानिकारक हुने बताएका छन् । सोंचमै पाप हुने व्यक्तिसँग मित्रता गर्दा आफैं समस्यामा पर्न सक्ने आचार्यको तर्क छ । यदि व्यक्तिकै दृष्टिमा पाप छ भने उसले तपाईं अनि तपाईंका परिवारप्रति नै कुदृष्टि राख्न सक्छ ।
गलत ठाउँमा रहने
कुनै व्यक्ति गलत वातावरणमा रहेको छ भने त्यो स्थानको प्रभाव अवश्य नै व्यक्तिका व्यवहारमा हुन्छ । जो आफैं गलतबाट दुर छैन् त्यस्तो व्यक्तिसँग मित्रता गर्दा तपाईंको जीवनमा पनि गलत नै प्रभाव पर्छ । आचार्य चाणक्यले राम्रो संस्कार र राम्रो वातावरणमा रहेको व्यक्तिसँग मात्रै मित्रता गाँस्न सुझाएका छन् ।
दुर्जन आनीबानीमा परेको पुरुषबाट टाढा रहनु
जो व्यक्ति गलत आनीबानीको घेराभित्र छ, उसँग मित्रता गाँस्नु हुँदैन । त्यो व्यक्तिको गलत आनीबानीले तपाईंको जीवनलाई नै पुरै प्रभावित बनाउन सक्छ । त्यसकारण आचार्य चाणक्य सदैव दुर्जन होइन स्वजनको साथ रहन सल्लाह दिन्छन् ।
जेठ ८ गते, २०७६ - १६:३० मा प्रकाशित